Tombontsoa lehibe 6 ho an'ny fahasalamana amin'ny famenony resveratrol （feno indrindra comprehensive
Home > Famandrihana resveratrol
Raha mitady toerana hividianana ianao Ny vovony resveratrol amin'ny ankapobeny, ny orinasa iray azonao itokisana an-jambany amin'ny famoahana akora manta dia Cofttek. Ny orinasa, noho ny ekipa mpikaroka mafonja sy ny departemantan'ny varotra natokana, dia nametraka fanatrehana manerantany tao anatin'ny fotoana fohy monja - manana mpanjifa sy mpiara-miasa manerantany izy. Ny resveratrol novokarin'ny orinasa dia tonga amina andiany lehibe 25 kgs ary nalaina avy tamin'ny akora faran'izay avo lenta, amin'izay dia azo antoka fa azo atokisana ny famenon-tsakafo vokariny ho an'ny kalitao sy ny fahombiazany. Raha te hividy resveratrol betsaka ianao, ny toerana tokana miantsena dia cofttek.com.
Inona no atao hoe Resveratrol?
Resveratrol (501-36-0) dia fitambarana polyphenolika izay hita amin'ny zavamaniry maro fa matetika amin'ny voaloboka. Resveratrol dia matetika antsoina hoe 'stilbene' noho ny firafiny ary io no stilbene malaza indrindra. Ny stilbenes dia fitambaran'ny zavamaniry fahita indrindra hita ao amin'ny fianakaviana voaloboka na dia mety misy kely aza amin'ny zavamaniry hafa koa. Ao anatin'ny voaloboka, ny resveratrol dia misy amin'ny hoditra ary miasa toy ny fitongaleonina na poizina zava-maniry, miaro ny voaloboka amin'ny aretina isan-karazany.
Nandritra ny taona maro, ny mpikaroka dia mbola very hevitra tamin'ny fahaizan'ny vahoaka frantsay mihinana sakafo manankarena amin'ny tavy nefa tsy voan'ny aretina vokatry ny koronosy. Betsaka ny olona no mihevitra fa ny resveratrol no valin'ity 'French Paradox' of Heart Disease. Raha ny marina, ny divay mena dia mitana andraikitra kely amin'ny famelana ity 'French Paradox' ity. Ny sakafo sy ny fomba fiaina dia zava-dehibe ihany koa.
Ireo firenena izay ankasitrahana ny fisotroana divay mena, dia hita fa mandany hatramin'ny 0.2 mg resveratrol isan'andro ny mponina. Na izany aza, any amin'ny firenena maro izay tsy itiavan'ny divay mena toy ny any Espana na Amerika Avaratra dia mirona amin'ny tsy fahampian'ny resveratrol ny mponina. Ireo mpamokatra, manerantany, dia tonga miaraka amin'ny famenon-tsakafo resveratrol izay mampanantena tombontsoa ara-pahasalamana maro indray mandeha.
Ny fanontaniana dia: misy fiantraikany ve ny resveratrol raha toa ny filazalazan'ireto farany ireto ho toy izany? Andeha hojerentsika ny fampiasana sasany resveratrol.
Maninona no mila resveratrol isika?
Ny divay mena dia mampihena ny kolesterola, tranga izay fantatry ny ankamaroantsika. Na izany aza, tsy maro amintsika no mahalala fa ny resveratrol mitambatra zavamaniry no manome divay mena an'ity trano ity. Ankoatry ny divay mena, resveratrol dia hita amin'ny sakafo maro hafa. Resveratrol (501-36-0) dia natokana voalohany tamin'ny 1939 ary nandritra ny taona maro, ny fikarohana natao tamin'ity fitambarana ity dia nanambara ny tombontsoa ara-pahasalamana isan-karazany, izay nanjary nitombo ny fangatahana an'ity fitambarana ity. Ankoatra ny fampidinana ny kolesterola, ny resveratrol dia fantatra ihany koa hanamafisana ny fiasan'ny kognita sy hifehy ny tosidra.
Ao amin'ity lahatsoratra faminaniana momba ny resveratrol ity dia resahantsika ny mahasoa azy, ny fampiasana ary ny fatra azo antoka ary koa manome torohevitra anao momba ny famoahana resveratrol tsara indrindra amin'ny 2021 ary koa ny toerana hividianana ny famolavolana zavamaniry amin'ny ampahany betsaka. Na dia izany aza, andao hanomboka hiorina amin'ny lohahevitra aloha isika.
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny resveratrol?
① Mampidina ny tsindry ra
Tamin'ny 2015, fanadihadiana iray dia nanambara fa ny haben'ny resveratrol dia mampihena ny tosidra systolika izay hitantsika fa isa ambony amin'ny famakiana tosidra. Ny fiakaran'ny tosi-dra systolika dia raisina ho loza mitatao amin'ny fahasalaman'ny olona iray satria mampitombo ny aretim-po amin'ny olona iray izany. Resveratrol dia mampihena ny tosidrà amin'ny famokarana oksida azota betsaka kokoa, izay, avy eo, dia mahatonga ny lalan-drà ho tony. Na dia misy porofo manamarina aza fa mampihena ny tosidra ny resveratrol, dia mila fikarohana bebe kokoa momba ny fatra marina. (1) Sonia L. Ramírez-Garza, Emily P. Laveriano-Santos,
② Fantatra mba hampitomboana ny fahasalamana ara-tsaina
Ny fandinihana natao nandritra ny taona maro dia naneho fa ny fihinanana divay mena matetika dia mampihena ny fihenan'ny kognitika efa antitra. Izany dia voalohany indrindra noho ny resveratrol misy amin'ny divay mena. Resveratrol dia manana toetra manohitra ny inflammato sy anti-oxidant ary mametra ny fiasan'ny beta-amyloids, izay tompon'andraikitra amin'ny fiatombohan'ny Alzheimer.
③ Ny Resveratrol dia mahasoa indrindra an'ireo olona voan'ny diabeta
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, dia natao ny fandalinana biby maromaro handinihana ny vokatry ny resveratrol amin'ny diabeta. Ao amin'ny biby, ny resveratrol dia mampitombo ny fahatsapana insuline ary manakana ny fiasan'ny enzyme tompon'andraikitra amin'ny fanovana glucose amin'ny sorbitol. Sorbitol dia siramamy izay mitarika amin'ny adin-tsaina ataon'ny oxidative ary mampiteraka fahasarotana amin'ny olona voan'ny diabeta. Miankina amin'izany, ny mpahay siansa dia mino fa ny resveratrol dia manetsika ny AMPK, proteinina manala ny glucose, ary mampihena ny haavon'ny siramamy ao anaty vatana.
④ Mety hamehy ny sela mararin'ny homamiadana izy io ary mety hampitombo ny androm-piainan'ny olombelona
Ny fikarohana dia naneho fa ny resveratrol dia mety hanakana ny fihanaky ny sela homamiadana ao anaty vatana amin'ny alàlan'ny fanovana ny fanehoana ny sela amin'ny sela homamiadana. Ny tena zava-dehibe kokoa dia ny fandinihana biby dia naneho ihany koa fa ny resveratrol dia manakana ny fihanaky ny homamiadana miankina amin'ny hormonina amin'ny alàlan'ny fitsabahana amin'ny fomba fitenin'ny hormonina sasany.
Torak'izany koa, ny fiantraikan'ny vidim-piainana resveratrol dia lohahevitra iray niresaka lehibe teo amin'ireo mpahay siansa. Tao amin'ny fandinihana biby maro, ny resveratrol dia nanatsara ny androm-piainan'ilay biby voafidy tamin'ny alàlan'ny fampandehanana ireo gen sasany fantatra fa hiady sy hanajanonana ireo aretina mifandray amin'ny taona. Ny mpahay siansa dia manantena valiny mitovy amin'izany amin'ny olombelona. Na izany aza, takiana bebe kokoa ny fikarohana.
⑤ Izy io dia fanafody mahomby amin'ny vanin-taolana sy fanaintainana
Resveratrol dia fanafody mahomby manohitra ny aretin-tsaina sy ny fanaintainana miaraka. Ity famokarana mifototra amin'ny zavamaniry ity dia miaro ny vatana amin'ny fanaintainan'ny aretin-kozatra sy ny aretin-kozatra amin'ny alàlan'ny fijanonana ny fahasimban'ny ratra. Ny fandinihana biby sasany koa dia naneho fa ny resveratrol dia miaro ny tonon-taolana amin'ny alàlan'ny fihenan'ny fivontosana.
⑥ Manome fiarovana amin'ny aretim-po izy io
Fiveratrol dia miaro ny fo amin'ny fomba samihafa. Ny fandinihana biby dia naneho fa miaro amin'ny aretim-po io sompirana io amin'ny fampijanonana ny fiasan'ny angovo manokana, izay mifamatotra amin'ny famokarana kolesterola. Ny tena zava-dehibe kokoa, satria ny fananana resveratrol dia manana fananana antioxidant, dia mampihena ny fitrandrahana ny kolesterola LDL, izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny fananganana takelaka amin'ny rindrin'ny aretibe.
Tsara ho an'ny aty ve ny Resveratrol?
Izy io dia niaro ny aty amin'ny ratra simika, cholestatic ary alikaola. Resveratrol dia afaka manatsara ny metabolisma glucose sy ny lipid profile ary mampihena ny fibrosis at steatosis amin'ny atiny. Ankoatr'izay, izy io dia afaka nanova ny fitambaran'ny asidra matavy sela.
Inona avy ireo sakafo sarotra amin'ny aty?
Sakafo 6 tokony hialana raha manana atavy matavy ianao
Ny alikaola dia antony lehibe mahatonga ny aretin'aty matavy ary koa ny aretin'aty.
Nanisy siramamy. Halaviro ny sakafo mamy toy ny vatomamy, cookies, soda ary ranom-boankazo.
Sakafo nendasina. Ireo dia be tavy sy kaloria.
Mofo fotsy, vary ary paty.
Ahoana no ahafahako mampatanjaka ny aty?
Fomba 13 hahazoana aty salama
Mitazona lanja mahasalama.
Mihinana sakafo voalanjalanja.
Manaova fanatanjahan-tena matetika.
Sorohy ny poizina.
Mampiasà toaka araka ny tokony ho izy.
Sorohy ny fampiasana fanafody mahadomelina.
Halaviro ny fanjaitra voaloto.
Mitadiava fitsaboana raha tratry ny ra ianao.
Aza mizara entana hadio manokana.
Manaova firaisana azo antoka.
Araho ny torolàlana momba ny fanafody rehetra.
Tsara ho an'ny voa ve ny Resveratrol?
Resveratrol dia afaka misoroka ny ratra voa, ao anatin'izany ny nephropathy diabeta, ny ratra voa vokatry ny zava-mahadomelina, ny ratra vokatry ny aldosteron, ny ratra ischemia-reperfusion, ny ratra voa voa vokatry ny sepsis, ary ny voa voahitsakitsaka, tamin'ny alàlan'ny vokadratika misy azy ary ny fampidirana SIRT1.
Manana resveratrol ve ny voanjo?
Voanjo: Ny diberana voanjo dia tsara amin'ny fitafiana paoma sy seleria, nefa misy resveratrol ihany koa (hatramin'ny 13 mg isaky ny kapoaka). Ny dibera voanjo dia loharano niacin sy manganese lehibe.
Manampy anao hihena ve ny Resveratrol?
Amin'ny ankapobeny, ny fanadihadiana natao tamin'ny meta dia nanaporofo fa ny fidiran'ny resveratrol dia nampihena be ny lanja, ny BMI, ny WC ary ny tavy matavy, ary ny fitomboan'ny volan'ny mahia, nefa tsy nisy fiatraikany tamin'ny haavon'ny leptin sy adiponectin.
Inona no ataon'ny Resveratrol amin'ny hoditra?
Resveratrol dia afaka miditra mora foana amin'ny sakana amin'ny hoditra ary mampihena ny fizotran'ny hoditra. Resveratrol koa dia manana anti-inflammatoire, anti-microbial, ary antioxidant fananana, ka mitazona ny hoditrao ho salama sy tsy ho tapaka lalan-drà sy mamaivay.
Inona no divay manana resveratrol avo indrindra?
Resveratrol dia mifamatotra mafy amin'ny voaloboka mena sy ny divay mena vita amin'ny voaloboka. Ny divay toa an'i Malbec, Petite Sirah, St. Laurent ary Pinot Noir no manana atiny resveratrol avo indrindra.
Mampitombo angovo ve ny resveratrol?
Resveratrol dia nofaritana ho fanahafana ny fetra kalorika, mitarika amin'ny fanatsarana ny fanatanjahan-tena sy ny fahatsapana insuline (fitomboan'ny fandaniana angovo), ary koa ny fananana fihenan'ny tavy amin'ny alàlan'ny fanakanana ny adipogenesis, ary ny fampitomboana ny fanentanana lipida amin'ny tavy adipose
Mampihena ny tosi-dra ve i Resveratrol?
Resveratrol dia manelanelana amin'ny fampidinana ny tosidra amin'ny alàlan'ny fampidinana oksidasiana proteinina, indrindra mandritra ny adin-tsaina oxidative, rafitra iray izay mety ho fampiasa matetika amin'ny molekiola antioksida.
Inona avy ireo sakafo be resveratrol?
Mety efa mihinana resveratrol marobe ianao. Izy io dia hita amin'ny sakafo toy ny voanjo, pistachios, voaloboka, divay mena sy fotsy, manga, cranberry, ary na dia ny sôkôla sy sôkôla mainty aza. Ireo zavamaniry niavian'ireny sakafo ireny dia manao resveratrol hiadiana amin'ny aretin'ny holatra, taratra ultraviolet, adin-tsaina ary ratra.
Inona no sakafo manana quercetin indrindra?
Ny Quercetin dia raketin'ny paoma, tantely, voaroy, tongolo, voaloboka mena, serizy, voankazo ary legioma maintso. Anisan'ny legioma sy voankazo, ny atin'ny quercetin dia tongolo be indrindra. Ny loko sy ny takamoa dia toa antony iray hamaritana ny fihenan'ny quercetin amin'ny tongolo.
Mampitombo ny testosterone ve ny resveratrol?
Hitan'ny mpikaroka fa nilatsaka 23.1 isan-jato ny tahan'ny testosterone rehetra teo amin'ireo vehivavy izay nahazo ny famenon'ny resveratrol. Raha ampitahaina, ny tahan'ny testosterone dia nitombo 2.9 isan-jato tao amin'ny vondrona placebo.
Inona no mitranga raha mihinana voaloboka isan'andro ianao?
Ny fihinanana voaloboka mahasalama amin'ny sakafo isan'andro dia afaka mamonjy anao amin'ny tsy fahampiana vy. Ireto voaloboka maina ireto dia ambany indrindra amin'ny kaloria ary mamy voajanahary. Izy ireo koa dia somary marefo, noho izany, manampy ny vatana hahatsiaro ho voky lava kokoa amin'ny servisy kely.
Afaka mihinana resveratrol be loatra ve ianao?
Rehefa raisina amina fatra hatramin'ny 1500 mg isan'andro mandritry ny 3 volana dia azo antoka ny resveratrol. Ny fatra ambony hatramin'ny 2000-3000 mg isan'andro dia nampiasaina soa aman-tsara nandritra ny 2-6 volana. Na izany aza, ireo doka resveratrol avo kokoa ireo dia mety hiteraka olana amin'ny vavony.
Mampihena ny testosterone ve ny Resveratrol?
Resveratrol dia mampihena ny haavon'ny androgen precursors miely fa tsy misy fiantraikany amin'ny, testosterone, dihydrotestosteron, haavon'ny PSA na ny habetsaky ny prostaty.
Tena miasa ve ny Resveratrol?
Ny fikarohana sasany dia mampiseho fa ny resveratrol dia mety hampifandraisina amin'ny risika ambany kokoa amin'ny fivontosana sy ny fivontosan'ny rà, izay mety hampihena ny risika amin'ny aretim-po. Saingy ny fikarohana hafa dia tsy nahita tombony tamin'ny resveratrol amin'ny fisorohana aretina aretim-po.
Inona no ataon'ny Resveratrol amin'ny tarehy?
Raha ampiharina amin'ny topy, ny resveratrol dia manampy amin'ny fiarovana ny hoditry ny hoditra, manelingelina ary manampy amin'ny fanoherana ny fitaoman-dratsy eo amin'ny tontolo iainana ary mampamirapiratra endrika somary reraka. Izy io koa dia manana fananana mampitony ny hoditra izay mety hanampy hampihena ny endrik'ilay mena
Ohatrinona ny resveratrol azoko raisina isan'andro?
Ny fatra resveratrol mety dia miankina amin'ny asa anaovana ny fanampiana. Ohatra, ny famenon-drà ho an'ny fikorianan'ny rà serebral dia mitaky olona mihinana resveratrol ao anatin'ny 250-500 mg, raha toa kosa ka voatokana ho an'ny aromatase, ny fihazonana dia mazàna mitazona 500 mg isan'andro.
Ny olona salama mandray resveratrol hanatsarana ny fahasalaman'ny kardia sy hanatsara ny faharetana dia asaina mitazona ny fatrany eo anelanelan'ny 150-445 mg. Na izany aza, ireo mijaly amin'ny fikorontanana rehetra dia asaina mitazona ny fatra ambany amin'ny 5-10mg isan'andro. Raha mijaly amin'ny toe-javatra rehetra ianao, alao antoka fa manatona ny dokoteranao alohan'ny hanombohana fanafody
Manamaivana hoditra ve ny Resveratrol?
Amin'ny fandinihana biby sy amin'ny fitsapana ara-pahasalamana, resveratrol 1% dia naseho mba hampihenana ny pigmentation entin'ny UV rehefa apetaka amin'ny hoditra. Ny analogs resveratrol, RTA ary RTG, dia naneho ihany koa ny vokatra manamaivana ny hoditry ny olombelona amin'ny fisedrana ara-pahasalamana amin'ny fifantohana voasedra (04% RTA, 0.8% RTA ary 0.4% RTG).
Ahoana no ampiharanao ny resveratrol amin'ny tavanao?
Green milaza ho an'ny serum, apetaho aorian'ny fanadiovanao, na raha mampiasa toner amin'ny fanazaran-tena ianao dia ampiharo aorian'io dingana io. Raha mampiasa resveratrol amin'ny moisturizer ianao dia ampiharo avy hatrany aorian'ny fanadiovana sy fanamafisana, indroa isan'andro, maraina sy hariva.
Tsara amin'ny mony ve ny Resveratrol?
Antioxidant iray antsoina hoe resveratrol hita ao amin'ny voaloboka sy divay mena no mety hanampy amin'ny famoahana ireo fialan-tsasatra ratsy, fanadihadiana vaovao avy amin'ny UCLA hita. Rehefa nampiharin'ireo mpikaroka ny resveratrol antioxidant amin'ny karazana bakteria miteraka mony dia hitan'izy ireo fa nanakana ny fitomboan'ny bibikely mamokatra pimple mandritra ny fotoana maharitra.
Azo antoka ve ny resveratrol ho an'ny voa?
Maharary ny voa ve ny CoQ10?
Ny voka-dratsin'ny CoQ10 dia toa tsy fahita firy sy malefaka. Anisan'izany ny fivalanana, ny maloiloy ary ny aretin'andoha. Loza. Ny olona voan'ny aretina mitaiza toy ny tsy fahombiazan'ny fo, ny voa na ny aty, na diabeta dia tokony hitandrina amin'ny fampiasana io famenony io.
Inona avy ireo sakafo misy resveratrol avo?
Izy io dia hita amin'ny sakafo toy ny voanjo, pistachios, voaloboka, divay mena sy fotsy, manga, cranberry, ary na dia ny sôkôla sy sôkôla mainty aza. Ireo zavamaniry niavian'ireny sakafo ireny dia manao resveratrol hiadiana amin'ny aretin'ny holatra, taratra ultraviolet, adin-tsaina ary ratra.
Inona ny vitamina sarotra amin'ny voa?
Ireo vitamina mety solika (A, D, E ary K) dia mety hitombo ao amin'ny vatanao, noho izany dia sorohina ireo raha tsy omen'ny dokotera voa. Ahiana indrindra ny vitamina A, satria mety hitranga miaraka amin'ny famenony isan'andro ny haavon'ny poizina.
Inona avy ireo sakafo manampy amin'ny fanamboarana voa?
Azo antoka ve ny Resveratrol?
Resveratrol nalaina amin'ny fatra hatramin'ny 1500 mg isan'andro amin'ny vava dia heverina ho azo antoka. Ny faharetan'ny fampidirana kosa dia tsy tokony hihoatra ny 3 volana. Ny fatra avo amin'ny sakamandimby 2000-3000 mg isan'andro dia azo alaina fa fantatra kosa ny mahatonga olana amin'ny vavony.
Ny vehivavy bevohoka sy mampinono dia tokony handray menaka resveratrol kely amin'ny vola kely. Na izany aza dia tokony hanandrana sy maka ny fatrany resveratrol takiana avy amin'ny loharano voajanahary izy ireo, toy ny volon-tsolika sy ny ranom-boaloboka. Tsy tokony ho lanin'ny vondrona ity ny divay.
Ny olona mijaly amin'ny aretin'ny rà dia tokony hisaraka amin'ny resveratrol satria mampihena ny fihosin-dra izany. Toy izany koa, ny olona mijaly amin'ny fepetra saro-pady amin'ny hormonina, toy ny ovarian, ny tranon-jaza, na ny homamiadan'ny nono dia tsy maintsy manalavitra ny supveratrol.
Tsara ho an'ny fonao ve i Malbec?
Ny voaloboka malbec dia manana ny hoditra matevina indrindra amin'ny karazam-boaloboka rehetra. Midika izany fa feno antioxidants resveratrol izy ireo izay lakilen'ny fahasalamana kardia sy hery fiarovan'ny vatana.
Mety hiteraka aretin'andoha ve i Resveratrol?
Nasehonay fa ny resveratrol dia miasa amin'ny fampivoarana ny fiasan'ny vasodilator endothelial, izay nitarika ny hafa hilaza fa ny resveratrol amin'ny divay mena dia mety miteraka migraine.
Inona avy ireo voka-dratsin'ny fihinanana resveratrol?
Resveratrol dia toa tsy misy vokany amin'ny doka fohy (1.0 g). Raha tsy izany, amin'ny fatra 2.5 g na mihoatra isan'andro, dia mety hisy vokany hafa, toa ny fahatsentsenana, fandoavana, fivalanana ary tsy fetean'ny aty amin'ny marary voan'ny atiny tsy alikaola
Inona no ampiasaina amin'ny resveratrol?
Ny fitomboan'ny lazan'ny resveratrol dia azo ampifandraisina amin'ny fampiasana samihafa amin'ity vokatra ity. Ny famatsiana resveratrol dia manentana ny fihenan'ny lanjan'ny olon-dehibe ary koa mamporisika ny hoditra tsara. Ny famatsiana resveratrol, rehefa alaina alohan'ny workout dia mampitombo ny tombontsoa mifandraika amin'ny fanatanjahan-tena fatratra. Ny fikarohana koa dia nanaporofo fa ny Resveratrol dia mihena glucose amin'ny rà ary manatsara ny fandatsahan-dra. Mampitombo ny fahatsapana insuline izany ary, noho izany, dia raisina ho fanampina tsara ho an'ny olona voan'ny diabeta. Izy io dia mandrisika ny fahasalamam-po amin'ny alàlan'ny fihenan'ny triglycerides. Farany, mampihena ny hetsika ny sela homamiadana ary fanafody mahomby manohitra ny aretin'andoha na aretin-tsaina miaraka.
Mampihena ny estrogen ve ny Resveratrol?
Resveratrol dia naseho mba hanafoanana ny fihanaky ny sela homamiadan'ny nono miabo tsara sy miiba amin'ny rafi-kolontsain'ny sela. Izy io dia miasa ho toy ny agonist estrogen na antagonist miankina amin'ny karazana sela, isoform an'ny receptor estrogen, ary ny fisian'ny estrogen (endogenous estrogen)
Inona avy ireo famantarana fa misy tsy mety amin'ny voanao?
Ny fiovana amin'ny fimasinao.
Pee mihosin-drà, feno rà, tsy misy loko, na volontany.
Fanaintainana rehefa mikoty ianao.
Mivonto amin'ny tananao, ny tananao, ny tongotrao, ny kitrokao, manodidina ny masonao, ny tavanao na ny kibonao.
Tongotra tsy milamina mandritra ny torimaso.
Fanaintainana iraisana na taolana.
Fanaintainana eo afovoan'ny lamosina misy ny voa.
Reraka foana ianao.
Azoko atao ve ny mandray resveratrol miaraka amin'ny olana tiroida?
Ireo data ireo dia manondro fa ny resveratrol dia mpanakana ny fitenenana sy ny fiasan'ny NIS amin'ny sela tiroida mahazatra. Ankoatr'izay, ny resveratrol dia toa manana anjara asa amin'ny tiroida tiroida, ary noho izany dia manome sosokevitra izahay mba hitandremana amin'ny fihinanana resveratrol marobe.
Inona ny endrika resveratrol tsara indrindra?
Ny divay mena no manana ny resveratrol avo indrindra amin'ny sakafo. Izany dia noho ny habetsahan'ny fotoana lanin'ny hoditra voaloboka amin'ny fermentation hanaovana divay mena. Resveratrol amin'ny fisotro misy divay mena dia antony iray mety nahareanao azy io ho salama am-po.
Manana resveratrol ve ny paoma?
Ekipa mpikaroka iray ao amin'ny University of Washington State no nanambara fa ny voaloboka, blackberry, voaroy, frezy ary paoma, manan-karena resveratrol, dia mandoro tavy be loatra. Ity no fomba. Paikady vaovao hisorohana sy hikarakarana ny matavy loatra dia miorina amina antioksida iray hita amin'ny voankazo maro: resveratrol.
Aiza no tokony hividianana vovo-dronono resveratrol amin'ny ampahany be?
Miaraka amin'ny fahafantaran'ny olona bebe kokoa ny tombotsoan'ny resveratrol, ny fangatahana fanafody supératrol dia nitombo be teny an-tsena. Izany dia nanjary nifaninana ireo orinasa mpamokatra mba hamokatra fanampin-tsakafo avo lenta hahazoana anjara amin'ny tsena. Raha mpanamboatra fanafody ara-pahasalamana mikasa ny hiditra amin'ny tsenan'ny famenony resveratrol ianao dia tokony ho azonao antoka fa mahazo ny vovony resveratrol avo indrindra ianao. Ny famoahana fitaovana tsara kalitao no dingana voalohany hiantohana ny fahombiazan'ny orinasa rehetra.
Raha mitady toerana hankanesana ianao mividy vovoka resveratrol amin'ny ankapobeny, ny orinasa iray azonao itokisana an-jambany amin'ny famoahana akora manta dia Cofttek. Ny orinasa, noho ny ekipa mpikaroka mafonja sy ny departemantan'ny varotra natokana, dia nametraka fanatrehana manerantany tao anatin'ny fotoana fohy monja - manana mpanjifa sy mpiara-miasa manerantany izy. Ny resveratrol novokarin'ny orinasa dia tonga amina andiany lehibe 25 kgs ary nalaina avy tamin'ny akora faran'izay avo lenta, amin'izay dia azo antoka fa azo atokisana ny famenon-tsakafo vokariny ho an'ny kalitao sy fahombiazany. Raha te hividy resveratrol betsaka ianao, ny cofttek.com no hany toerana hiantsenana.
(1) Sonia L. Ramírez-Garza, Emily P. Laveriano-Santos, María Marhuenda-Muñoz, Carolina E. Storniolo, Anna Tresserra-Rimbau, Anna Vallverdú-Queralt ary Rosa M. Lamuela-Raventós1 (2018) Vokatry ny fahasalamana amin'ny resveratrol: Vokatry ny fitsapana ho an'ny olombelona, Voaforona.10 (12)
(2) Bahare Salehi, Abhay Prakash Mishra, Manisha Nigam, Bilge Sener, Mehtap Kilic, Mehdi Sharifi-Rad, Patrick Valere Tsouh Fokou, Natália Martins, ary Javad Sharifi-Rad (2018) Resveratrol: Sabatra roa sosona eo amin'ny lafiny fahasalamana. 6 (3).
(3) Adi Y. Berman, Rachel A. Motechin, Maia Y. Wiesenfeld & Marina K. Holz (2017) Ny tanjaky ny fitsaboana fitsaboana resveratrol: famerenana ny fitsapana momba ny fitsaboana, npj Precision Oncology volume 1, laharana Article: 35 edn.
(5) Fitsangatsanganana ohatra.
(6) Oleoylethanolamide (oea) - ilay wand mahagaga amin'ny fiainanao.
(7) Anandamide vs cbd: iza no tsara kokoa amin'ny fahasalamanao? Izay rehetra tokony ho fantatrao momba azy ireo!
(8) Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny nikôtinamid riboside chloride.
(9) Fanampiny magnesium l-threonate: tombontsoa, ​​fatra, ary vokany hafa.
(10) Palmitoylethanolamide (pea): tombony, fatra, fampiasana, famenony.
(11) Tombony 5 be indrindra amin'ny fihinanana phosphatidylserine (ps).
(12) Tombony 5 ambony amin'ny fihinanana quinone pyrroloquinoline (pqq).
(13) Ny famenon-tsakafo nootropic tsara indrindra an'ny alpha gpc.
(14) Ny famenon-tsakafo tsara indrindra ho an'ny monotucleotide nicotinamide (nmn).